Golaha wasiirada fadaraalka maku faraxsan yihiin dhacdadii Af-urur? – Idil News
Golaha wasiirada fadaraalka maku faraxsan yihiin dhacdadii Af-urur?
Qoraalkan hoos ku qoran ee aad arki doontaan waa warmurtiyeedkii shirka Golaha wasiirada fadaraalka ee maanta.
Loogama hadlin oo laguma soo qaadin weerarka argagixisada ee Puntland,xataa laguma xusin khasaaraha Puntland gaaray.
Shacabka geeriyooday ee argagixisadu laysay looguma tacsiyayn,
cajiib,cajiib Cajiib ,taariikh baa qornaysa waxii qarsoonaa ayaa tartartiib usoo baxaya,waxaa sidaa u dhaqmaya waa dawlada fadaraalka ee sheegata in ay dalkoo idil matasha.
Wadaniyada iyo kartida Ra’isalwasarae Khayre ma Xamar kaliya yaya aragtaa.
Waxaan ku kalsoonahay in Puntalnd isku filan tahay”
Halkan ka akhriso warmurtiyeedka golaha w.fadaraalka”